musha / Applications / Induction drum drying / electromagnetic induction kudziyisa chigubhu chakaomeswa
Category: Induction drum drying Tags: tenga induction heat drum dryer, electromagentic rotary drum dryer, electromagnetic induction heat drum dryer, induction kuomesa, induction drying hita, induction heat drum dryer, induction heat drum dryer mutengo, induction heat dryer, induction kupisa kuomesa kofi, induction kupisa kuomesa chikafu, induction kupisa kuomesa zviyo, induction kupisa kuomesa nzungu, induction heat drum dryer, induction rotary drum dryer
Electromagnetic induction heat Drum dryer imhando yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya kuomesa chikafu, kofi, soya bhinzi, zviyo, nzungu, nzungu, mafuta, zvinhu zvakaoma uye zvimwe zvekurima uye zveparutivi zvigadzirwa kana chikafu. Zvishandiso zvekudziisa zvechinyakare dhiramu-mhando yekufryer pani kazhinji zvitofu zvemarasha, vaporization furnaces kana magetsi ekudziya. Izvo zvitatu zviri pamusoro apa zvinopisa zvigadziridzo zvose zvisina kunanga kupisa nzira, kureva, kupisa kunotamirwa kune frying pani nenzira yekupisa kupisa.
Nekuda kwematambudziko ekushomeka kwekupisa uye kushandiswa kwesimba kwakanyanya mune yechinyakare dhiramu frying pani, electromagnetic. induction heat drum dryers dzakaonekwa pamusika, kureva kuti, chigubhu chekuomesa chinodziiswa kuburikidza nemusimboti we electromagnetic induction heat. Musimboti wayo wekushanda ndewekuti: Drum dryer Kune akawanda seti emagetsi emagetsi coils kunze, uye akawanda seti emagetsi emagetsi coils anogadzira anochinjana magineti minda mushure mepfuura nepakati peinochinjana ikozvino. Sezvo chigubhu chekuomesa chichiita mafambiro ekucheka mitsara yemagineti mune inotsinhanisa magineti, inochinjika ikozvino inogadzirwa mukati medhiramu dryer. Ndiko kuti, eddy current, iyo inodhumhana nekukwesha nemaatomu mukati mepani yekubira nekumhanya kukuru, zvichibva zvagadzira kupisa kweJoule kwekupisa. Nekuti iyo yekudziya sosi ye electromagnetic chigubhu chakaomeswa ndicho chigubhu chakaomeswa pachacho, chinogona kunyatsogadzirisa dambudziko rekushomeka kwemafuta emarasha emarasha, vaporization mavira uye magetsi ekudziya emagetsi.
Nekudaro, nekuda kwekuvapo kwemaseti akawanda emagetsi emagetsi coils, kune simba rekuchinjana magineti rakatenderedza electromagnetic induction yekudziisa dhiramu dryer, uye inochinjanisa magineti inoburitsa magetsi emagetsi. Kana akawanda emagetsi madhiramu madhiramu muindasitiri achishanda panguva imwe chete, iwo emagetsi radiation Inokuvadza zviridzwa zvemukati zvemichina michina, nekudaro ichikanganisa hupenyu hwesevhisi yemuchina. Pamusoro pezvo, zvakare hazvina kunaka kuti vashandisi vashande munzvimbo ye electromagnetic radiation kwenguva yakareba. Naizvozvo, zvinodikanwa kudzikisa magetsi emagetsi anogadzirwa neiyo electromagnetic drum dryer.
Induction Heating Schematic yeRotary Drum Dryer
1.Induction Heating ine Multi-Turn Helical External Induction Coil
Induction macoil ekudziya anomonerwa akatenderedza donje rekudzivirira iro rinoputirwa nedhiramu rekuomesa. Iyo yakawanda-inotendeuka helical ronda coils uye kuomesa dhiramu inotenderedzwa panguva imwe chete. Iyo induction heat system inomhanya kupisa dhiramu rekuomesa nekukurumidza uye inoshanda.
2.Induction Heating neMulti-Turn Helical Internal Induction Coil
Induction heat coils inokuvadzwa mukati medhiramu yekuomesa, iyo yakawanda-inotendeuka helical ronda coils uye kuomesa dhiramu inotenderedzwa panguva imwe chete. Iyo induction heat system inomhanya kupisa tembiricha yemukati yedhiramu rekuomesera.
3. Induction Heating neStationary External Induction Coil
Induction kupisa makoiri akakomberedzwa ekunze makoiri akaiswa parutsigiro pamusoro pedhiramu rekuomesa. Kana dhiramu rekuomesera richitenderera, iyo induction heat coil inoramba yakamira. Iyo induction heat system inomhanya kupisa dhiramu rekuomesa nekukurumidza uye nemaitiro.
4. Induction Heating neStationary Internal Induction Coil
Induction heat coils zvinogadzirwa zvinoenderana nehukuru hwekuomesa dhiramu, uye kuiswa mukati medhiramu. Kana iyo rotary drum dryer ichitenderera, induction yekudziya coil inoramba yakamira. Iyo induction heat system inomhanya kupisa tembiricha yemukati yedhiramu rekuomesera.
5.Induction Heating neStationary Multi-Turn Helical External Induction Coil
Induction heat coils inokuvadzwa padhuze nerutsigiro, uye pane imwe nzvimbo pakati perutsigiro rwecoil uye chigubhu chekuomesa. Kana dhiramu rekuomesera richitenderera, iyo induction heat coil inoramba yakamira. Iyo induction heat system inomhanya kupisa dhiramu rekuomesa nekukurumidza uye nemaitiro.
Electromagnetic heat inonziwo electromagnetic induction heat, kureva, electromagnetic heat (mutauro wokune imwe nyika: Electromagnetic heat abbreviation: EH) tekinoroji. Iyo musimboti wekudziya kwemagetsi ndeyekugadzira inochinjika magineti kuburikidza nezvikamu zvemagetsi edunhu bhodhi. Zvichireva kuti, kucheka mitsara yemagineti yesimba inochinjana inoburitsa ikozvino (kureva eddy current ) muchikamu chesimbi chepasi pegaba. Eddy current inoita kuti vatakuri vari pasi pegaba vafambe nekumhanya kukuru uye zvisina tsarukano, uye zvinotakura nemaatomu zvinodhumhana nekukweshana kuburitsa simba rekupisa. Kuti kuve nemhedzisiro yekudziya chinhu. Nekuti chigadziko chesimbi chinoburitsa kupisa pachacho, mwero wekushandura kupisa wakanyanya kukwirira, kusvika pa95%. Iyo nzira yekudziya yakananga. Induction cooker, induction cooktop uye electromagnetic heat mupunga cooker zvese zviri kushandisa electromagnetic kudziyisa tekinoroji.
Zvakaipa zvechinyakare kuramba kudziyisa
Kurasikirwa kukuru kwekupisa: Iyo nzira yekudziya inonyanya kushandiswa nemabhizinesi aripo inogadzirwa newaya yekupikisa, uye mukati nekunze mativi edenderedzwa anoburitsa kupisa. Mumhepo, inokonzera kurasikirwa kwakananga uye kupera kwesimba remagetsi.
Ambient tembiricha inokwira: Nekuda kwehuwandu hwekurasikirwa kwekupisa, tembiricha yenharaunda yakapoteredza inokwira, kunyanya muzhizha, iyo ine simba guru pamamiriro ekugadzira. Dzimwe tembiricha dzekushanda pasaiti dzakapfuura 45 degrees. marara echipiri.
Hupenyu hupfupi hwesevhisi uye kugadzirisa kukuru: tembiricha yekudziya yemagetsi yekudziya chubhu yakakwira kusvika 300 madhigirii nekuda kwekushandiswa kwewaya yekupokana, iyo thermal lag yakakura, hazvisi nyore kunyatso kudzora tembiricha, uye waya yekupokana iri. kuvhuvhuta nyore nyore nekuda kwekuchembera kwakanyanya. Hupenyu hwesevhisi hweiyo inowanzoshandiswa yemagetsi kupisa coil inenge hafu yegore, saka basa rekuchengetedza rakawanda.
Zvakanakira zve electromagnetic induction kudziyisa zvigadzirwa
Hupenyu hwakareba hwebasa: Iyo electromagnetic yekudziya coil pachayo haikonzere kupisa, saka ine hupenyu hurefu hwesevhisi, hapana kugadzirisa, uye haina mari yekugadzirisa uye yekutsiva; chikamu chekupisa chinotora chimiro chetambo-chakaita semhete, tambo pachayo haiburitse kupisa, uye inogona kumira tembiricha yakakwira pamusoro pe500 ° C, nehupenyu hwesevhisi kusvika kumakore gumi. Hapana kugadzirisa kunodiwa, uye hapana mutengo wekugadzirisa munguva inotevera.
Yakachengeteka uye yakavimbika: Rusvingo rwekunze rwedhiramu runodziiswa ne-high-frequency electromagnetic action, kupisa kunoshandiswa zvizere, uye hapana kurasikirwa. Kupisa kunounganidzwa mukati memuviri wekudziya, uye tembiricha yepasi peiyo electromagnetic coil yakakwira zvishoma pane tembiricha yekamuri, iyo inogona kubatwa zvakachengeteka pasina yakakwirira tembiricha yekudzivirira, iyo yakachengeteka uye yakavimbika.
Kunyanya kushanda nesimba uye kuchengetedza simba: Iyo yemukati yekupisa yekupisa nzira inogamuchirwa, uye mamorekuru ari mumuviri wekudziya anopinza zvakananga simba remagineti kugadzira kupisa. Iyo inopisa yekutanga inokurumidza kwazvo, uye avhareji preheating nguva inopfupikiswa neanopfuura 60% kana ichienzaniswa neanopikisa coil kudziyisa nzira. Kuenzaniswa nekudzivirirwa kwecoil kudziyisa, inochengetedza 30-70% yemagetsi, iyo inovandudza zvakanyanya kushanda kwekugadzira.
Kudzora tembiricha kwakaringana: Iyo coil pachayo haiburitse kupisa, kudzoreredza kwemafuta kudiki, iyo inertia yekupisa yakadzikira, tembiricha yemukati nekunze madziro ebhodhoro inopindirana, tembiricha yekudzora ndeyechokwadi munguva chaiyo, mhando yechigadzirwa inovandudzwa zvakanyanya. uye kubudirira kwekugadzira kwakakwirira.
Insulation yakanaka: Iyo electromagnetic coil inogadzirwa neyakagadzirirwa yakakosha yakakwirira-tembiricha uye yakakwirira-voltage yakakosha tambo, iine yakanaka insulation performance, isina kutarisana zvakananga nemadziro ekunze kwetangi, hapana kuvuza, kupfupi-kutadza kutenderera, uye hapana kunetseka.
Kuvandudza nzvimbo yekushanda: Muchina wekuumba jekiseni wakashandurwa nemagetsi ekudziya emagetsi unotora nzira yekudziya yemukati, kupisa kunonangana mukati memuviri wekudziya, uye kupisa kwekunze kunenge kusipo. Kupisa kwepamusoro kwemidziyo kunogona kuvandudzwa kusvika panogona kubatwa nemuviri wemunhu, uye tembiricha yepakati inodzikiswa kubva pamusoro pe100 ° C kana coil yekupikisa ichipisa kusvika kune yakajairika tembiricha, iyo inovandudza zvakanyanya nharaunda yekushanda yekugadzirwa. saiti, inonyatso kuwedzera kufarira kwevashandi vekugadzira, uye inoderedza mutengo wekufefetera uye kutonhora munzvimbo yechirimo chirimo. Zvinoenderana nepfungwa ye "vanhu-vanotarisana nevanhu", isu tichagadzira nharaunda ine hushamwari, yakachengeteka uye yakagadzika kugadzirwa kwenzvimbo yemafekitori nevashandi vepamberi vekugadzira.
Zvishandiso zvekupisa induction:
Industrial electromagnetic simba rekuchengetedza shanduko inoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedza simba shanduko yepurasitiki muchina kupisa, huni, kuvaka, chikafu, zvekurapa, indasitiri yemakemikari, senge epurasitiki jekiseni rekuumba muchina, extruder, firimu rinofuridza muchina, waya yekudhirowa muchina, firimu repurasitiki, pombi, waya nemimwe michina, kugadzira chikafu, machira, kudhinda nekudhaya, simbi, indasitiri yemwenje, michina, kupisa kwepamusoro kurapwa uye welding, boilers, boilers emvura uye mamwe maindasitiri, anogona kutsiva kupisa kupisa, pamwe nemafuta akavhurika moto echinyakare simba. .
Kudhinda machira uye dhayi: kushandiswa kwekudziya kwemagetsi kune zvigadzirwa zvinogona kuvandudza kugona kwesimba, kuwedzera kupisa kumhanya, uye kugadzirisa tembiricha kutonga;
Indasitiri yemwenje: kuiswa chisimbiso kwemakani uye mamwe mapurasitiki ekurongedza, nezvimwe.
Indasitiri yeboiler: Kutora mukana wekukurumidza kupisa kwayo kumhanya, iyo electromagnetic boiler inogona kusiya iyo yakazara yekudziya nzira yechinyakare bhailer, uye ichingopisa yekubuda kwemvura yebhailer, kuitira kuti kuyerera kwemvura kupedze kupisa mukuyerera, kumhanya kwekupisa. inokurumidza, uye nzvimbo inochengetwa.
Indasitiri yemuchina: yakakwira-frequency electromagnetic heat inogona kuiswa pakupisa kurapwa nesimbi, uye mhedzisiro yacho inovandudzwa zvakanyanya kana ichienzaniswa nemaitiro ekurapa maitiro. diathermy before pressure working;
Iko kushandiswa kweiyo electromagnetic yekudziya tekinoroji haingobatsiri kuvandudzwa kwemhando yechigadzirwa, kugona kugadzira, kuchengetedza simba uye kudzikiswa kwemutengo, asiwo kuvandudza tekinoroji yemabhizinesi ekugadzira michina. Inonyanya kugamuchirwa uye inoshandiswa mumaindasitiri echinyakare.